Xil heynta Waare & Cali Guudlaawe oo idlaatay! - Axadle
Muddo xileedka 4-sano ee Hogaamiyaha DG Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare & Cali-Guudlaawe Xuseen ayaa idlaatay 17-kii bishaan Oktoobar 2020 oo ku beegneed shalay oo Sabti ahayd.
Inkasta oo uu Waare badalay Madaxweynihii hore ee maamulkaas Cali Cabdullaahi Cosoble, balse waxa uu dhameystire u ahaa muddo xileedka ka harsan waqtiga dastuuriga ah ee lagu simay awoodda xilheynta hay’adaha kala duwan ee maamulkaas.
Dhismaha maamulka Hir-Shabeelle ayaa ka kooban Gobollada Shabeelaha Dhexe & Hiiraan, kaliya dhaq-dhaqaaqa siyaasadeed waxa uu ka socdaa Magaalada Jowhar, waana tan keentay in uu muuqdo hamiga Cali Guudlaawe Xuseen oo ku rajo weyn in uu u tartamo xilka Hogaamiyaha.
Dhismaha DG Hir-Shabeelle 4-sano kahor waxa uu qaatay bilooyin is jiid-jiid ah oo u dhaxeeyay Hogaamiyayaasha Beelaha ee Gobollada Hiiraan & Shabeelaha Dhexe, inkasta oo xal laga gaaray markii dambe.
Haatan waxaa muuqda caga-jiid siyaasadeed oo dhanka soo xulista Baarlamaanka ah, isu duwidda Ergada Beeraha iyo gaarista tallaabooyinka muhiimka u ah muujinta howsha socota sida dadka qaar ay aaminsan yihiin.